Hanafainganana ny Xubuntu-nao amin'ireto fika tsotra ireto | Ubunlog
Hanafainganana ny Xubuntu-nao amin'ireto fika tsotra ireto
Xubuntu no tsiro ofisialy Ubuntu natao ho an'ny solosaina tsy manam-bola firy. Tsy dia maivana tahaka ny Xubuntu izy io fa maivana noho ny Kubuntu sy Ubuntu. Ity tsiro ofisialy ity dia mitondra ny birao Xfce, birao iray tena feno sy maivana. Na izany aza, Ny Xubuntu dia mety mavesatra amin'ny solosaina sasany. Ny iray amin'ireo antony ireo dia mety ho avy amin'ny fanatanterahana fanavaozana Xubuntu maro, fampitomboana ny fanjifana harena noho ny kinova Ubuntu vaovao.
Manaraka izany dia holazainay aminao fika isan-karazany hanafainganana ny fanombohana sy ny fiasan'ny Xubuntu tsy mila manova ampahany amin'ny fitaovana toy ny kapila mafy na fitadidiana ram.
1 Diovy ny fitaovanao
2 Esory ireo voamadinika izay tsy ampiasainay
3 Manova fampiharana mahazatra
4 Fiampangana haingana kokoa
Diovy ny fitaovanao
Raha manana fametrahana Xubuntu taloha izay nohavaozina araka ny kinova izahay, dingana lehibe ny manadio sy mampihena ny isan'ireo rakitra ampiasaintsika. Ho an'ity dia afaka mampiasa fitaovana toa ny Bleachbit isika. Saingy alohan'ny handefasana ity fitaovana ity dia amporisihanay izany Andao hodinihintsika ireo rindranasa napetraka ary hamafana ireo izay tsy ampiasaintsika. Mpandrindra mailaka izay tsy ampiasainay, mpamadika kapila, sns ... Ary aorian'izay dia ampiharo avy eo ny fitaovana bleachbit.
Esory ireo voamadinika izay tsy ampiasainay
Ny kernel dia singa iray manan-danja fa marina ihany koa fa iray ihany no ilaintsika. Noho izany ny vahaolana tsara dia ny fanesorana ireo voan-trondro taloha ary dika roa fotsiny no avela: ilay ampiasainay sy ilay kinova taloha izay miasa tsy misy olana. Manala ny voan-javatra tsy misy olana azontsika ampiasaina ny fitaovana ukuu, fitaovana iray misy interface interface izay manampy antsika hanafoana ny kinova kernel taloha.
Manova fampiharana mahazatra
Xubuntu dia miaraka amin'ny rindranasa mandany loharano sasany hanatanterahana asa fototra. Ny sasany amin'ireto fampiharana ireto dia efa nilaozan'ny toetr'andro ary mety hosoloin'ny sasany. Noho izany, ny Libreoffice dia azo ovaina amin'ny Abiword sy Gnumeric na afaka manala izany rehetra izany izahay ary manova azy io amin'ny hitsin-dàlana mankany amin'ny Google Docs. Chromium na Firefox dia mpizaha tena lehibe fa mavesatra be, afaka misafidy vahaolana hafa toa ny SeaMonkey na palemoon. Toy izany koa ny VLC na Gimp.
Fiampangana haingana kokoa
Ho fanampin'ireo voalaza etsy ambony ireo dia afaka mametraka sy / na mampandeha programa roa manampy antsika hanafaingana ny Xubuntu isika. Ny voalohany amin'izy ireo dia antsoina hoe preload ary ny faharoa kosa dia zRam. Manokatra terminal izahay ary manoratra izao manaraka izao:
zRam dia azo apetraka amin'ny fampiasana ity baiko manaraka ity:
Aorian'ny fametrahana azy dia averintsika indray ny solosaina ary ho tsikaritray sahady ny vokany. Preload dia mahatonga ny fandefasana rakitra mandritra ny fanombohana ny rafitra, ka manafaingana ny fizotrany ary zRam dia manery ny rakitra ao anaty fahatsiarovana ram ny fanaovana ny fitaovana tsy dia manana lanja firy.
Tsy ireo dingana ireo ihany fa ireo no tsotra indrindra ary ireo izay mahatonga ny Xubuntu hanafainganana be. Mendrika ny hanaovana azy io ary hahazoana ny valiny tsara ho an'ny Xubuntu.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Hanafainganana ny Xubuntu-nao amin'ireto fika tsotra ireto
Lvis J. Casasola G. dia hoy izy:
Miarahaba an'i Joaquín García!
Nanontany tena aho; Nandinika lahatsoratra vitsivitsy ivelan'ny tranokala ubunlog aho izay nilazan'izy ireo fa ny Zram function dia tsy manohana mpikirakira sasany, ohatra: Intel Atom, ilay ampiasako dia manana ny mampiavaka azy: N450 (1.66GHz, cache 512kb), marina ve izany ?
Hanampy ahy be dia be ianao amin'ny firesahana azy, satria tsy manapa-kevitra aho raha toa ka mendrika ny apetraka amin'ny Xubuntu 18.04 izany ary hanatsara ny zava-bitako.
Izaho koa dia nametraka preload, fa ity kosa dia mamela zavatra maro irina satria tsy hanafainganana ny fizotran'ny OS dia mampiadana azy. Nahoana no hitranga izany? Nataoko tao amin'ny Xubuntu izany ary tsy nahazo valiny tsara.
Ary koa, zavatra ivelan'ny lohahevitr'ity pejy ity. Fa maninona no misy fotoana rehefa mametraka repositories na programa hafa dia mandefa hafatra: (Error: retrieving gpg key timed out.) Tsy mandeha ve ireo mpizara?
Valiny tamin'i Lvis J. Casasola G.
Ny sekoly Linux dia mihodina 20 ary namoaka ny kinova 6.1
Ahoana ny fanamboarana Windows MBR amin'ny Ubuntu